Doonyo lagu qabtay Xeebaha gobolka Mudugu – Radio Muqdisho
Wararka ka imaanaya deegaan xeebeedka Ceel-Huur oo ka tirsan gobolka Mudug ayaa sheegay in Ciidamo ka tirsan maamulka Ximan iyo Xeeb ay gacanta ku dhigeen labo Doonyood oo si sharci daro ah ugu Kalluumeysanayay xeebaha gobolka Mudug gaar ahaan xeebta Ceel-Huur.
Gudoomiyaha deegaanka Ceel-Huur Maxamed Maxamuud Cali ayaa sheegay in Ciidanka maamulka Ximan iyo Xeeb ay qabteen labo Doonyood oo Kalluumeysi isla markaana laga leeyahay dalka Iraan.
Gudomiye Cali ayaa intaa ku daray in Kalluumeysiga sharci darada ah uu aad ugu badan Xeebaha gobolka Mudug isla maraana Ciidanku u suurtagashay in ay gacanta ku dhigaan labadan Doomood.
Talaabadan lagu qabtay Doonyahan laga leeyahay dalka Iraan ayaa imaanaysa iyadoo mudooyinkan dambe ay cabasho xoogan ka soo yeeraysay dadka Kallumeysatada ah oo ku dhaqan xeebaha gobolada Mudug iyo gobolo kale oo kamid ah maamulka Puntland.
Madaxweynaha oo kulanka la yeeshay gudiga Naafada Qaranka”SAWIRRO”
Wasiirka Arrimaha gudaha oo Kismaayo si weyn loogu soo dhaweeyay "Sawirro"